Ekiri ya mere! - Book of Alexander Grenehed | Apg29
Ekiri ya mere! - Book of Alexander Grenehed
Ugbu a, m bipụtara m akwụkwọ mbụ, "Watch mere!"
Na akwụkwọ nke 263 peeji nke, m ga-achọ, na ọtụtụ ndị e biri ebi na Akwụkwọ Nsọ si Swedish Ndị mmadụ Bible, na-atụ aka ihe Okwu Chineke kwuru banyere nnọọ ikpeazụ oge na njikọ na Jesus mbata.
My ọchịchọ bụ na ndị ọzọ ga-enweta a nghọta ka ukwuu nke Bible omimi na ụtụ isi na a ọzọ nghọta na nke a buru ibu okwu.
Site na-ịbịa ìhè na Bible na amụma ahụ na nzuzo anyị nwere ike n'ezie na-ihe ọmụma nke ihe na-eme.
All anyị apụghị ịza, ma ụfọdụ ajụjụ akara ịgbatị mgbe ụfọdụ mkpu mmeri na-aghọ a ajụjụ akara.
Ihe Nlereanya nke bekee
Nnyocha na-agụ akụkọ
e kere eke nke afọ
Àmà na-egosi na onye amụma ụgha
The àmà abụọ
Ebe ọ bụ na m na na na a ma ama na onye dere, na-eche free ịgwa ndị ọzọ banyere akwụkwọ ahụ, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-agụ ya ma na-eche na ọ bụ ihe nwere.
Ịtụ akwụkwọ via email: alexgrenehed@gmail.com
Tinye aha gị na adreesị.
Lezienụ swish on 0705130619
Ọ bụrụ na ị na-adịghị swish, ya biko banyere ya mgbe ị na ịtụ.
Price 100 SEK + 50 SEK mbupu / akwụkwọ
(Ọ bụrụ na ị na-ebi Örebro m biputere ya ozugbo gị igbe akwụkwọ ozi)